पदाधिकारी हुन् कि जन्ती ? « Nepali News
Home/Nepali News/पदाधिकारी हुन् कि जन्ती ? « Nepali News
ठूलो रस्काकस्सीका वीच सत्तारुढ दलले पदाधिकारी टुङ्गो लाएको छ । डेढ वर्ष लामो जोडबलपछि जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोकिएका छन् । धेरै जिल्लाका सह–इन्चार्जको लिस्ट देख्दा लाग्छ उनीहरु जिल्लामा आयोजना हुने पार्टीको विशेष महाधिवेशनका लागि गठित मूल समारोह समिति सदस्य हुन् ।
सह–इन्चार्ज पनि दुई तीन जना मात्रै भए पो, कुनै कुनै जिल्लामा त एक दर्जन हाराहारी छन् । जिल्ला सह–इन्चार्ज छु भन्न पनि मजा न नआउने । नेकपाले राजपा पदाधिकारीलाई पनि जित्ने गरीको जम्बो टोली नै छान्या छ । सिरहामा १०, काठमाडौं, धनुषा र दाङमा ९÷९, कैलालीमा सात जना सह–इन्चार्ज छन् ।
बाह्र वर्ष रामायण पढ्यो सीता कस्की जोई भन्या जस्तो भन्या जस्तै अझै १२ जिल्लाका सह–इन्चार्ज चुनिन सक्या छैनन् । डेढ वर्षयताको मिटिङ पनि के बस्या हो कुन्नी ? काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र विरगञ्ज महानगरका सह–इन्चार्ज बन्ने दौडमा लाग्याहरुलाई हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा जस्तो भा’छ ।
यी सबै नगरमा सह–इन्चार्ज को बन्ने अझै टुङ्गो छैन । केही इन्चार्ज र सह–इन्चार्जलाईलाई दुवै हातमा लड्डु मिल्या छ । सांसद र मन्त्री पनि भा’छन् फ्याट्ट पार्टी पदाधिकारी पनि पट्काएका छन् ।
मलाई कसैले काम दिँदैन, म के गरौं-नसीरुद्दीन शाह – Nepali News
शाहरुख खान अब के गर्दैछन् ? – Nepali News
माधवकुमार नेपालकाे ७ बुँदे नाेट अफ डिसेन्ट, ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने माग – Nepali News
भारतसँग दरो संवाद गर्न जरुरी छ : प्रचण्ड – Nepali News
चितवनमा भाइरल ज्वरो र डेंगुका बिरामी बढे – Nepali News
सुदूरपश्चिममा सुरु भयो गौरा पर्व – Nepali News
इटहरीमा लाखेसँग ‘जाइरा’
मल्टिस्टार ‘तख्त’लाई लिएर गम्भिर करण – Nepali News
चोरमारामा बसको ठक्करबाट साइकल यात्रुको मृत्यु, मोटरसाइकल चालक घाइते – Nepali News
गुल्मीमा १० महिनामा २४० सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा – Nepali News
संसदमा उठ्यो रवि लामिछानेको विषय, अनुसन्धान प्रभावित हुने चिन्ता – Nepali News
आलुको बोक्रा सौन्दर्य र स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक – Nepali News
सांसदले भनेः ज्योतिषीलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ – Nepali News
एनआरएनए स्विट्जरल्याण्डको पीडा : पदमा बस्देउ न !
माधवले गुमाउने केही छैन ! – Nepali News
दीलिपको संस्मरणः ‘दर्पण छाँया’ले ५१ दिन मनाउँदाको त्यो पल – Nepali News
Bank Job – Officer
Bank Job – Branch Manager, Junior Assistant, Messenger